चार करोडभन्दा बढीको ज्यान लिएको स्पेनिश फ्लूबाट हामीले के सिक्यौँ? « Dainik Online
चार करोडभन्दा बढीको ज्यान लिएको स्पेनिश फ्लूबाट हामीले के सिक्यौँ?
प्रकाशित मिति : २० बैशाख २०७७, शनिबार ७ : ३१
त्यो महामारीलाई 'मदर अफ अल प्यान्डेमिक' अर्थात् 'सबै महामारीको आमा' भन्ने गरिन्छ। सो महामारीमा सन् १९१८ देखि १९२० सम्म दुई वर्षमा चारदेखि पाँच करोड मानिसको ज्यान गएको विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन डब्लूएचओ र यूएस सेन्ट्रर्स फर डिजिजेज् कन्ट्रोल सीडीसीको तथ्याङ्क छ।
वैज्ञानिक र इतिहासकारहरू त्यसबेला विश्वको कुल जनसङ्ख्याको एक तिहाइको स्पेनिश फ्लूका कारण मृत्यु भएको बताउँछन्। त्यसबेला विश्वको जनसङ्ख्या १.८ अर्ब थियो। पहिलो विश्वयुद्ध सकिँदै गर्दा उक्त भाइरस फैलिएको थियो। तर महामारीमा विश्वयुद्धमा मारिएकाभन्दा धेरैको ज्यान गयो।
विश्व कोभिड-१९ सँग जुझिरहेका बेला त्यो महामारी कस्तो थियो र त्यसबेला विश्व कस्तो अवस्थामा पुगेको थियो? महामारी समाप्त भएपछि विश्वमा के परिवर्तन भयो? यदि तपाईँले अहिलेसम्म स्पेनिस फ्लू महामारीबारे सुन्नु भएको छैन भने पनि कोरोनाभाइरस सङ्कटका कारण बीसौँ शताब्दीको सुरुवातको त्यो खतरनाक भाइरसबारे जान्न पक्कै उत्सुक हुनुहुन्छ।
रोगको उपचार गर्ने मामिलामा सन् १९१८ मा चिकित्सा र विज्ञान आजको तुलनामा निकै सीमित थियो।
चिकित्सकहरूलाई माइक्रोअर्गानिज्मका कारण स्पेनिश फ्लू भइरहेको छ र यो एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्छ भन्ने थाहा भएको थियो। तर त्यसबेला उनीहरूले यो भाइरसको साटो ब्याक्टेरियाका कारण भइरहेको छ भन्ने ठानेका थिए।
त्यसबेला उपचार पनि सीमित थियो। विश्वको पहिलो एन्टिबायोटिक नै सन् १९२८ मा पत्ता लागेको थियो। फ्लूविरुद्ध लगाइने खोप त झन् सन् १९४० मा मात्र सर्वसाधारणका लागि उपलब्ध भएको थियो। त्यसबेला सबैका लागि स्वास्थ्य सेवा सम्भव नै थिएन। धनी देशहरूमा पनि सार्वजनिक स्वच्छता एउटा विलासी सुविधा थियो।
"औद्योगिक देशहरूमा अधिकांश चिकित्सकहरू कि आफैँ काम गर्थे वा च्यारिटी तथा धार्मिक संस्थाद्वारा रकम दिइन्थ्यो र अधिकांश नागरिकले उपचारको सुविधा पाउन असम्भव थियो," एक पुस्तक 'पेल राइडर: द स्पेनिस फ्लू अफ १९१८ एन्ड हाउ इट चेन्ज्ड द वर्ड'की लेखिका लोरा स्पिनी भन्छिन्।
स्पेनिश फ्लूले पहिले कुनै पनि महामारीले नगरेको जस्तो हमला गरेको थियो। सन् १८८९ मा देखिएको अर्को महामारीमा पनि १० लाख मानिसहरूको ज्यान गएको थियो तर त्यो स्पेनिश फ्लूजस्तो ठूलो मात्रामा फैलिएको थिएन। स्पेनिश फ्लूबाट मारिनेमा अधिकांश २० देनि ४० वर्षका युवा थिए। महिलाभन्दा पुरुषमा बढी प्रभाव परेको थियो।
भारतमा स्पेनिश फ्लूबाट जनसङ्ख्याको ५.२ प्रतिशत प्रभावित भएका थिए। त्यो भनेको करिब एक करोड ७० लाख हुन्छ। त्यसको आर्थिक असर पनि निकै ठूलो थियो। बरो त्यस महामारीले संसारभर कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा छ प्रतिशतको गिरावट आएको ठान्छन्।
'प्यान्डेमिक-१९१८' नामक पुस्तककी लेखिका क्याथरिन अर्नोल्ड भन्छिन्, "पहिलो विश्वयुद्ध र स्पेनिश फ्लूले एउटा त्रासदी पैदा भएको थियो।" स्पेनिश फ्लूबाट पीडित हुनेमा क्याथरिनकै हजुरबुवा र हजुराआमा पनि थिए।
"कैयौँ देशहरूमा घरबार चलाउन जिम्मेवारी लिने, खेती गर्ने, वा व्यापार गर्ने युवाहरू जीवित थिएनन्। विवाह गरेर त्यसलाई पूर्ति गर्नका समेत मानिसहरू थिएनन्," उनी भन्छिन्। योग्य पुरुष नभेट्दा लाखौँ महिलाहरू समस्यामा परेका थिए।
उनी भन्छिन्, "सन् १९२० सम्म देशका सबै कर्मचारीहरूमा महिलाहरूको हिस्सा बढेर २१ प्रतिशत पुगेको थियो। त्यसै वर्ष अमेरिकी कङ्ग्रेसले संविधानको १९औँ संशोधन गरेर महिलाहरूलाई मतदानको अधिकार दिएको थियो।
उनी भन्छिन्, "सन् १९१८ को फ्लूले कैयौँ देशहरूमा महिलाहरुको अधिकारमा प्रभाव र परिवर्तन गरेको प्रमाण भेटिन्छ।" कामदारको अभावका कारण मजदुरहरूको तलब पनि बढ्यो।
केही सिद्धान्तका अनुसार महामारीका बेला आमाहरूमा देखिएको तनावको असर उनीहरूको गर्भाशयमा रहेका भ्रुणमा पर्‍यो। सन् १९१५ देखि १९२२ मा जन्मिएका र अमेरिकी सेनामा भर्ना भएकाहरूको तथ्याङ्क विश्लेषणबाट सन् १९१९ मा जन्मिएकाहरूको उचाइ एक मिलिमिटर कम पाइएको थियो।
भारतीय राष्ट्रवादीहरूले यो महामारीका बेला ब्रिटिश शासकले राम्रो व्यवस्थापन नगरेको भन्दै त्यसैलाई मुद्दा बनाए। सन् १९१९ मा 'योङ्ग इन्डिया'को एउटा अङ्कमा महात्मा गान्धीले ब्रिटिश अधिकारीहरूको कडा आलोचना गरे।
विश्वयुद्धका कारण विश्वभरका देशहरू शत्रु भएका थिए तर यो महामारीले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको महत्त्वलाई पनि दर्शाएको थियो। सन् १९२३ मा लिग अफ नेसन्स बन्यो। त्यसले स्वास्थ्यसम्बन्धी काम गर्ने निकाय पनि बनायो। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन भने सन् १९४८ मा मात्र खुलेको हो।
लोरा स्पिनी लेख्छिन्, "कैयौँ देशहरूले सन् १९२० मा कि त स्वास्थ्य मन्त्रालय बनाए वा त्यसमा आमूल परिवर्तन गरे।" उनी स्पेनिश फ्लूकै कारण यस्तो भएको बताउँछिन्।
एक महिनापछि फिलाडेल्फियामा स्पेनिस फ्लूबाट १० हजार मानिस मरेका थिए भने सेन्ट लुइमा ७०० भन्दा पनि कम मानिसको मात्र ज्यान गयो। यति धेरै अन्तरले के देखाउँछ भने महामारी रोक्नका लागि लकडाउन र सामाजिक दूरी निकै प्रभावकारी छ।
स्पेनिश फ्लूले ठूलो शिक्षा दिए पनि त्यसलाई बिर्सिएको महामारी ठानिन्छ।
कोरोनाभाइरसबाट अहिले धेरै नेताहरू सङ्क्रमित भएजस्तै त्यसबेला पनि अमेरिकी राष्ट्रपति र ब्रिटिश प्रधानमन्त्रीलाई पनि उक्त रोग लागेको थियो।
ब्राजिलका राष्ट्रपति रोड्रिगेज अल्भेसको त स्पेनिश फ्लूकै कारण ज्यान गएको थियो। तर यो महामरी पहिलो विश्वयुद्धको छायामा पर्‍यो। युद्धका बेला कति सरकारहरूले समाचारमै प्रतिबन्ध लगाएका थिए। त्यसले गर्दा स्पेनिश फ्लूको धेरै जानकारी बाहिर आउन पनि पाएन।